pcb ဘုတ်အဖွဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံများအတွက်အများအပြားဘုံမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းများ - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2017-03-06 hits:
pcb ဘုတ်အဖွဲ့အထောက်အထားများတွင်အသုံးပြုမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းများကွဲပြားခြားနားကြသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး. ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ဓာတု, ငွေယူပြီး, ယင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်. ဒါဟာခဲ-အခမဲ့ဂဟေနှင့် Smt အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်, အထူးသဖြင့်ဒဏ်ငွေများအတွက်လိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် သာ. ကောင်း၏, အရေးအပါဆုံးအရာမျက်နှာပြင်ကုသမှုများအတွက်ဓာတုငွေအများအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်, အလွန်ခြုံငုံကုန်ကျစရိတ်နှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချမည်သည့်. အောက်ပါသေးငယ်တဲ့စီးရီး pcb ဘုတ်အဖွဲ့သက်သေပြဘို့အများအပြားဘုံမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုရန်သင့်အားမိတ်ဆက်.
1. HASL ပူလေကြောင်း level (မှုန်ရေမွှားဖြူအဖြစ်လူသိများ)
သံဖြူ pcb ဘုတ်အဖွဲ့သက်သေများ၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်တစ်ဦးအသုံးအများဆုံးကုသမှုနည်းလမ်းကိုဖြစ်ပါတယ်လေပေါ်မှာ. အခုတော့ခဲမှုန်ရေမွှားသွပ်နှင့်ခဲ-အခမဲ့မှုန်ရေမွှားဖြူသို့ခွဲခြား. မှုန်ရေမွှားဖြူ၏ကောင်းကျိုးများ: အဆိုပါ PCB ပြီးဆုံးပြီးနောက်, ကြေးနီမျက်နှာပြင်လုံးဝ wetted ဖြစ်ပါတယ် (လုံးဝဂဟေမတိုင်မီဖြူနဲ့ဖုံးလွှမ်း), ခဲ-အခမဲ့ဂဟေများအတွက်သင့်လျော်သော, အနိမ့်ဖြစ်စဉ်ကိုရင့်ကျက်, အမြင်အာရုံစစ်ဆေးခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်တိုင်းတာခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သော, လည်းမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော pcb ဘုတ်အဖွဲ့. အဆိုပါသက်သေအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများတစ်ခုမှာ.
2. ဓာတုနီကယ်ရွှေ (ENIG)
နီကယ်-ကိုရွှေကြီးမားသောလျှောက်လွှာနှင့်အတူမျက်နှာပြင်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် proofing pcb ပန်းကန်တစ်မျိုး. သတိရ: အဆိုပါနီကယ်အလွှာတစ်နီကယ်-phosphorus ကိုအလွိုင်းအလွှာဖြစ်ပါသည်, သောဖော့စဖောရက်အကြောင်းအရာအရသိရသည် High-phosphorus ကိုနီကယ်နှင့်အလတ်စား-phosphorus ကိုနီကယ်သို့ကွဲပြား. အဆိုပါ application ကိုကွဲပြားခြားနားသည်. နီကယ်-ချထားတဲ့ရွှေကောင်းကျိုးများ: ခဲ-အခမဲ့ဂဟေများအတွက်သင့်လျော်သော; မျက်နှာပြင်ကအရမ်းပြားချပ်ချပ်ဖြစ်ပါသည်, Smt များအတွက်သင့်လျော်သော, လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သော, switch ကိုအဆက်အသွယ်ဒီဇိုင်းများအတွက်သင့်လျော်သော, လူမီနီယံဝါယာကြိုးစဘွန်းများအတွက်သင့်လျော်သော, ထူသောအပြားများအတွက်သင့်လျော်သော, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တိုက်ခိုက်မှုဆန့်ကျင်အားကောင်းတဲ့.
3. Electroplated နီကယ်ကိုရွှေ
Electroplated နီကယ်ကိုရွှေသို့ကွဲပြား "hard gold" နှင့် "ခဲယဉ်းသောရွှော့ပျောင်းသောရွှေကို", hard gold (ကဲ့သို့: ရွှေကိုဘော့အလွိုင်း) လေ့ကိုရွှေလက်ချောင်းများအပေါ်ကိုအသုံးပြုသည် (အဆက်အသွယ်ကွန်နက်ရှင်ဒီဇိုင်း), ပျော့ပျောင်းသောရွှေကိုရွှေစင်ဖြစ်ပါသည်. Electroplated နီကယ်ကိုရွှေ IC လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပျဉ်ပြားပေါ်တွင်လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် (ထိုကဲ့သို့သော PBGA အဖြစ်). ဒါဟာကိုရွှေဝါယာကြိုးများနှင့်ကြေးနီဝါယာကြိုးစဘွန်းများအတွက်အဓိကအားသင့်လျော်သည်. သို့သျောလညျး, က IC လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပြားတွေကိုသင့်လျော်သည်. အဆိုပါကပ်လျက်တည်ရှိသောရွှေလက်ချောင်းဧရိယာချထားတဲ့ခံရဖို့အပိုကူးမှုဝါယာကြိုးလိုအပ်ပါတယ်. proofing နီကယ်-ကိုရွှေ pcb ဘုတ်အဖွဲ့ electroplating ၏ကောင်းကျိုးများ: အဆက်အသွယ် switch ကိုဒီဇိုင်းနှင့်ရွှေဝါယာကြိုးစဘွန်းများအတွက်သင့်လျော်သော; လျှပ်စစ်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်သင့်လျော်သော
4. နီကယ်ပယ်လေဒီယမ်ရွှေ (ENEPIG)
နီကယ်-ပယ်လေဒီယမ်ကိုရွှေယခု pcb ဘုတ်အဖွဲ့သက်သေ၏လယ်ပြင်တွင်လျှောက်ထားခံရဖို့စတင်တာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်မရောက်မီတစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွေအတွက်အသုံးပြုထားပြီး. ရွှေနှင့်လူမီနီယံဝါယာကြိုး binding များအတွက်သင့်လျော်သော. နီကယ်-ပယ်လေဒီယမ်ရွှေ pcb ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူ proofing ၏ကောင်းကျိုးများ: IC လေယာဉ်တင်သင်္ဘောပေါ်တွင်လျှောက်ထား, ကိုရွှေဝါယာကြိုးစဘွန်းနှင့်လူမီနီယံဝါယာကြိုးစဘွန်းများအတွက်သင့်လျော်သော. ခဲ-အခမဲ့ဂဟေများအတွက်သင့်လျော်သော; အဘယ်သူမျှမနီကယ်ချေး (အနက်ရောင်ပန်းကန်) ENIG နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြဿနာ; ENIG ထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် Electro-နီကယ်ကိုရွှေကုန်ကျ, မျက်နှာပြင်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်သင့်လျော်သော.
အပြောင်းအလဲနဲ့နည်းလမ်းများ proofing pcb ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အထက်အများအပြားအမျိုးအစားများအပြင်, ဒါကြောင့်လည်းဓာတုသံဖြူတို့ပါဝင်သည်. ဓာတုသံဖြူမျက်နှာပြင်ကုသမှုဒီလိုအလျားလိုက်လိုင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သည်, ထိုသို့ကိုလည်းအသုံးပြုပါသည်. ဒဏ်ငွေလိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စီမံကိန်းတွင်, သငျသညျမျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းကို proofing အဆိုပါ PCB မျက်နှာပြင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါ, သင်အမှန်တကယ်အခွအေနေရန်လိုအပ်, မျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းလမ်းကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ဆက်စပ်., ဘတ်ဂျက်ကုန်ကျစရိတ်, ဒါ့အပြင်ထုတ်လုပ်သူလက္ကားထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ proofing pcb ဘုတ်အဖွဲ့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်.
ပြီးခဲ့တဲ့လက HASL နှင့် HASL ခဲ-အခမဲ့အကြားခြားနားချက်
နောက်တစ်ခုသုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ" PCB ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်?